Umthetho wamalungelo abasebenzi - Labour Law
AMALUNGELO OMTHETHO WABASEBENZI, ZIKHUSELE!
Le ncwadana yenzelwe ukuphendula imibuzo eqhelekileyo ngamalungelo wabasebenzi kwindawo yabo yempangelo nokuze inikele ngengcebiso yamalungelo anokusetyenziswa ngawo ngawo ngokomthetho xa abasebenzi begxothwa.
Halala! Ndiwufumene umsebenzi!
Xa ufumene umsebenzi, inyathelo lokuqala kukutyobela isivumelwano sengqesho. Unelungelo lokufumana imimiselo nemiqathango ebhalwe phantsi yokuqeshwa kwakho. Uza kufumana nekopi yendlela nenkqubo yoluleko. Umqeshwa unoxanduva lokubeka izimvo zomqeshi nangokuba nokholo oluhle.
Umqeshi umele alungiselele umqeshwa, ngaphandle kwentlawulo, iimpahla zokhuseleko nezixhobo zokwenza umsebenzi wakhe.
Ndinexesha elingakanani phambi kokuba ndifudukele kumsebenzi omtsha?
Ukuba usebenza ngaphantsi kweenyanga ezi-6 kufuneka ufake isaziso seveki enye ngaphambi kokuba uyeke.
Ukuba usebenze ngaphezulu kweenyanga ezi-6 kodwa ngaphantsi kweenyanga ezili-12 kufuneka ufake isaziso seeveki ezi-2.
Ukuba usebenze ngaphezulu konyaka, kufuneka ufake isaziso seeveki ezi-4.
Ukuba isivumelwano sakho sithetha enye into, umzekelo, kufuneka ufake isaziso kwinyanga yekhalenda, olo lungiselelo luya kusebenza ukuba umqeshi nomqeshwa bavumelana ngesaziso senyanga enye.
Ukhuseleko lomthetho wabasebenzi lukho kubasebenzi abaqeshiweyo hayi abasebenzi abazimeleyo. Umsebenzi ozimeleyo ngumntu osebenzela ommye umntu esebenza ngokwesivumelwano sakhe nomqeshi aze angabiyiyo inxalenye yenkampani okanye abe phantsi kolawulo lomqeshi. Umzekelo, ufowounela umntu olungisa imibhobho yamanzi ukuze alungise umonakalo omkhulu wokwaphuka kwemibhobho, wenza umsebenzi oyinkonzo ezimeleyo kwaye akanguye umqeshwa.
Abasebenzi basemakhitshini nabasegadini abasebenza amaxesha athile, ngabaqeshwa futhi bakhuselwa ngumthetho wabasebenzi. Eneneni, kukho imithetho ekhethekileyo elawula eli candela lo msebenzi, neflifumaneka kwiwebhusayithi yeSebe Lezabasebenzi (Department of Labour).
Umqeshwa osebenza ixesha eliqingqiweyo?
Umsebenzi wexesha eliqingqiweyo ngumntu oqeshwe ixesha elithile okanye kwiprojekthi ibe uyafaneleka ukuba abe ngumqeshwa. Ngokuqhelekileyo akufane kwenzeke umntu oqeshwe ixesha eliqingqiweyo asebenze ngaphezulu kweenyanga ezintathu. Ukuba kunjalo, uqqalwa njengomqeshwa osisigxina. Olu lungiselelo lusebenza kubaqeshwa abanomvuzo okumlinganiselo othile obekwe nguMphathiswa Wezabasebenzi rhoqo ngonyaka. Lo mlinganiselo, kunyaka ka-2016 wawuqikelelwa kwi-R205 000 ngonyaka. Zikhona nezinye iimeko ezikhethekileyo oya kuzichazelwa ligqwetha lakho.
Kuthekani ngee-arhente eziqeshayo?
Ukuba uqeshwe yiarhente eziqeshayo okanye inkonzo zemisebenzi yexeshana, unokunikwa umthengi wezo nkonzo iinyanga ezintathu kuphela. Ukuba usebenzela umthengi wezi nkonzo ixesha elide kuneli, uza kuthathwa njengomqeshwa womthengi weenkonzo. Ukuba kukho ukunyhashwa kwamalungelo akho unokumangalela iarhente eziqeshayo kunye/okanye umthengi weenkonzo.
Iarhente eqeshayo imele ibhalise neSebe Lezabasebenzi.
Ukuba iarhente yabasebenzi eqeshayo igxotha umqeshwa kuba efuna ukwaphula umthetho, oko akunafeya.
Ncedani! Ingathi ndisebenza ngapha komlinganiselo
UMthetho Weemeko Ezisisiseko Zokusebenza 75 ka-1997 (BCEA) umisela imimiselo nemiqathango yabaqeshwa. Ukuba isivumelwano sokuqeshwa sineemeko ezinganeno kwezo zifunwa yi-BCEA, kuza kusebenza ezo zesivumelwano. Kodwa ukuba imimiselo nemiqathango ingaphezulu kweye-BCEA, kuza kusebenza iimeko ze-BCEA.
Ithini i-BCEA ngexesha lekhefu?
Unelungelo leentsuku ezili-15 zekhefu ngonyaka. Awuveli nje uziqokelele ezi ntsuku, ngoko ukuba awuzisebenzisi iintsuku zekhefu zonyaka, kufuneka uzisebenzise kwiinyanga ezintandathu emva koko, ngaphambi kokuba zikulahlekele.
Ukuba usebenza iintsuku ezintathu ngeveki, unelungelo leentsuku ezingama-30 zokugula kwiminyaka emithathu.
Unelungelo leenyanga ezine zekhefu lokubeleka ungahlawulelwa. Ungafaka isicelo saloo ntlawulo kwiNgxowa Ye-inshorensi Yabangasenziyo (Unemployment Insurance Fund).
Unelungelo leentsuku ezintathu zokunyakela iingxaki zosapho ngonyaka njengokuswelekelwa lilungu losapho, xa umntwana egula okanye xa kuzalwa umntwana wakho. Ziintsuku zintathu ke kuzo zonke ezi zehlo – kungekona iintsuku ezintathu kwishehlo ngasinye.
Ithini i-BCEA ngeeyure zokusebenza?
Umqeshwa unokusebenza iiyure zingama-45 ngeveki. Ukuba umqeshwa usebenza ngaphantsi kweeyure ezintlanu, akamelanga asebenze ngphezulu kweeyure ezili-9 ngosuku. Ukuba umqeshwa usebenza iintsuku ezintandathu okanye ngaphezulu ngeveki, akamelanga asebenze ngaphezu kweeyure ezisibhozo usuku ngalunye.
Ixesha elongezelelekileyo linokusetyenzwa ngaphantsi kwemimiselo yesivumelwano kwaye umqeshwa unelungelo lokuhlawulwa umlinganiselo oyi-1.1/2 kumlinganiselo womvuzo weyure ayisebenzileyo/ixesha lokuphumla. Ukuba umqeshwa akasebenzi ngokuqhelelekileyo ngeCawa okanye ngeHolide kaWonkewonke ngoko ukusebenza ezi ntsuku ziiyure ezongezelelekileyo, kwaye unelungelo lokuhlawulwa ngokuphindwe kabini okanye ixesha lokuphumla.
Ilungiselo ngeeyure zomsebenzi alibhekiseli kubaqeshwa abahlawulwa ngaphezulu komlinganiselo obekwe nguMphathiswa Wezabasebenzi, obeke ngasentla, kodwa unokutshinshwa ngamaxesha athile.
Hayi bo! Ndigxothiwe
Umqeshi unokugxotha umqeshwa ukuba kungezi zizathu ezilandelayo KUNYE nokuba uye walandela inkqubo engenamkhethe. Kukho izizathu ezithathu qha ezinokwenza umqeshwa agxothwe –
Izizathu ezimalunga nokutshintsha kwendlela ekusetyenzwa ngayo; okanye
Ukungakwazi ukusebenza kumayelana nokugula, ukwenzakala okanye ukusebenza ngomlinganiselo ophantsi. Izizathu zomsebenzi kujongiswa kuzo njengokudendwa okanye ukuncitshiswa kwabantu emsebenzini.
Umqeshi umele ahambisane nenkqubo yokuziphatha noluleko. Ukuba ayikho le nkqubo kwindawo yempangelo, kuya kuyakusetyenziswa eyoMthetho Wezabasebenzi 66 ka-1995 (LRA). I-LRA ichaza ukuba kufuneka kubekho inkqubo ethe ngqo elandelwayo athi umqeshi ayilandele xa efuna ukugxotha umqeshwa nangasiphi na isizathu kwezi zingentla. Nokuba umqeshi unezizathu ezivakalayo kodwa ohluleke ekulandeleni le nkqubo ye-LRA, ukugxothwa akusayi kwamkeleka.
Kuyintoni ukungaziphathi ngendlela?
Umqeshwa unokugxothwa ukuba uye waphula umthetho ocacileyo. Ukuba umqeshwa ebesazi (okanye ebemele ukuba uyazi) ngalo mithetho nokuba umthetho lo usetyenziswa ngendlela efanayo kwindawo yempangelo.
Umqeshi umele abambe ukuphulaphulwa koluleko apho umqeshwa eya kunikwa ithuba elaneleyo ngesaziso sokuphulaphulwa koluleko ukuze azilungiselele. Umqeshi umele amnike ithuba lokuba achaze elakhe icala aze abize awakhe amangqina kwaye aze awancine amangqina. Umqeshwa akavumelekanga ngokuzenzekelayo ukuba abe negqwetha xa kuphulaphulwa ululeko, kodwa unokusebenzisa igqwetha lomfela-ndawonye okanye omnye umqeshwa.
Nokuba umqeshwa ufunyaniswe enetyala, ukugxothwa kwakhe akusoloko kusisohlwayo esifanelekileyo. Umqeshi kumele akhangele iimeko zomqeshwa ngaphambi kokuba isigqibo sokugxothwa kwakhe senziwe.
Mayelana nokugxothwa ngenxa yokungakwazi ukusebenza nangenxa yezizathu zomsebenzi (‘ukudendwa/ukuncitshiswa’)?
Ukuze umqeshi asebenze ngokufanelekileyo ufanele alandele inkqubo nomqeshwa/ummeli wabaqeshwa xa yonke inkcazelo ihlolisiswa aze umqeshi afumane ithuba lokuza neengcebiso aze anike umqeshi izizathu zokwenza isigqibo.
Inkcazelo echazwe kwi-LRA ithatha ixesha ukuyifezekisa kwaye iquka okungakumbi kunentlanganiso nje enye nomqeshi.
Igqwetha lakho liya kukunika inkcazelo engakumbi ngale nkqubo.
Mayelana nokwenzakala emsebenzini?
Ukuba uye wonzakala usemsebenzini unokufaka isicelo sembuyekezo kwiKomishinala Yembuyekezo. Umqeshi wakho umele akuncede ngamaxwebhu ayimfuneko ukuze ufake isicelo.
Xa ufuna ukufaka isicelo sokwenzakala emsebenzini kufuneka ukhumbule ezi zinto zilandelayo:
Chaza umphathi okanye umqeshi wakho ngokukhawuleza; umqeshi kufuneka afake ingxelo kwiKomishilana Yembuyekezo (Compensation Commission) aze athumele iifomu eziyimfuneko.
Kufuneka ufumane ifomu eyi W.C1.2 kumqeshi wakho ukuze uye nayo kugqirha aze akugcwalisele yona. Kufuneka uphinde uyibuyisele kumqeshi.
Umqeshi kufuneka ayithumele kumKomishinala Wembuyekezo aze agcine umqeshi esazi ngeenkcukacha ukuze xa kufika imali kumqeshi zivela kwiKomishinala Yembuyekezo zikwazi ukuthunyelwa kuwe.
Ukuba awuyithumelanga ifomu okanye uthathe ixesha elide lokufaka isicelo, kufuneka uqhagamshelane neziko lezabasebenzi uze uchaze lo mba.
Ngaba ndinelungelo lentlawulo yokungasebenzi?
Ukuba uye wagxotha (nokuba kungasiphi isizathu sokugxothwa) unokufaka isicelo kwiNgxowa Ye-Inshorensi Yabangasebenziyo. Umqeshi wakho unokunceda ngeefomu ezifanelekileyo ukuze ukwazi ukuya kwiSebe Labasebenzi.
Ukuba uvakalelwa ukuba ukugxothwa kwakho kwakungahambanga ngokomthetho, unokufaka isicelo kwiziko le-CCMA kwiintsuku ezingama-30 zokugxothwa. I-CCMA iza kukulungiselela usuku lokuphulaphula. Ngalo mhla iKomishinala iza kuzama ukuchophela umba ukuze ijonge ukuba ayikho indlela ekungavanwa ngayo na. Ukuba akunjalo, umele aqhubeke nothethwano (kufana netyala lasenkundleni).
Abameli bezomthetho abafane bavunyelwe kwi-CCMA, kodwa amagosa emifela-ndawonye okanye omnye umqeshwa unokukumela.
Inamba yase-CCMA yomnxeba ithi: 0861 16 16 16
Iifomu zokuqalisa inkqubo zinokukhutshelwa kwiwebhusayithi ye-CCMA eyile www.ccma.org.za
Unokutyelela iwebhusayithi yeSebe Lezabasebenzi ukuze ufumane inkcazelo ethe vetshe kule miba sixubushe ngayo kule ncwadana kule dilesi www.labour.gov.za